FAQ - Foshan Cerarock Ceramics Co., Ltd.
Sand Series Series
Tora matevina Granite
FANONTANA FOTOTRA FOTOTRA
Inona ny vidinao?
Ny vidin-tsika dia miova arakaraka ny famatsiana sy ny anton-tsena hafa. Haniraka anao ny lisitry ny vidin'ny fanavaozana aorian'ny fifandraisan'ny orinasanao aminay raha mila fanazavana fanampiny ianao.
Misy habe ambany indrindra ve ny fatra?
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana habetsaky ny filaharana ambany indrindra. Raha mitady hivarotra ianao nefa amina habe kely kokoa dia manoro hevitra ianao hijery ny tranokalanay
Azonao atao ve ny manome tahirin-kevitra mifanaraka amin'izany?
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny tahirin-kevitra isika ao anatin'izany ny taratasy fanamarinana / Fomba fanarahana; Insurance; Ny fiaviany sy ny antotan-taratasy fanondrana hafa izay takiana.
Amin'ny firy ny fotoana fitarihana antonony?
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana raha toa ka (1) nandray ny tahirim-bolanao ianao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Inona no karazana fandoavam-bola ekenao?
Azonao atao ny mandoa ny kaonty amin'ny banky, Western Union na PayPal:
Fametrahana 30% mialoha, ny fifandanjana 70% manoloana ny kopin'ny B / L.
Inona ny 'warranty vokatra »?
Manome antoka ny fitaovana sy ny asa izahay. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra azontsika. Ao anaty antoka foana na tsia dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Azonao antoka ve ny fanaterana vokatra azo antoka sy azo antoka?
Eny, mampiasa fonosana fanondranana avo lenta foana izahay. Mampiasa fonosana mampidi-doza manokana ho an'ny entana mampidi-doza sy famafazana mangatsiaka fitehirizam-bola ho an'ny entana saropady. Ny fonosana manampahaizana manokana sy ny takian'ny fonosana tsy manara-penitra dia mety mitaky haba fanampiny.
Ahoana ny momba ny saram-pandefasana fandefasana?
Ny vidin'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba safidinao hahazoana ireo entana. Express matetika amin'ny fomba haingana indrindra fa koa lafo indrindra. Ny seran-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be. Ny saran'ny entana mivezivezy azontsika omena anao fotsiny raha fantatsika ny antsipirian'ny habetsahan'ny lanjany, ny lanjany ary ny fomba. Azafady mba mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
TEO hiasa miaraka amintsika amerikana ve?
Rohy momba ny rohy
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana.
Midira ao hitady na ESC hanidy